Dowladaha Qatar iyo Sacuudiga oo dib u bilaabay iney ku loolamaan Soomaaliya – Bandhiga
Dowladaha Qatar iyo Sacuudiga oo dib u bilaabay iney ku loolamaan Soomaaliya
Dowladaha Sacuudiga iyo Qatar oo loolankooda Soomaaliya uu bilowday markii Soomaaliya ay dhex-dhexaad ka noqotay wadamada Khaleejka ee xiriirka u jaray Soomaaliya, waxaa qarxay loolan iyo dagaal Dibloomaasiyadeed oo dalaka carabta ku hayaan Soomaaliya.
Soomaaliya waxey diiday iney xiriirka u jarto Qatar, dowlada Qatarna waxey bilowday iney Soomaaliya ka fuliso mashaariic horumarineed oo waa weyn.
Sacuudiga iyo Imaaradka Carabta oo ka xun go’aanka dowladda Soomaaliya ayaa xiriiro hoose la yeeshay maamulada Somaliland iyo Puntland.
Imaaradka wuxuu magaalada Boosaaso ka dhisay dekad weyn, sidoo kale wuxuu saldhig military uu ka dhistay magaalada Berbera iyaoo aan fasax ka qaadan dowladda Federalka Soomaaliya.
Dowladda Qatar waxey kordhisay taageerada dhaqaale ay siiso Dowladda dhexe ee Soomaaliya,waxaa ugu dambeeyay in ay Qatar dhisto dekadda magaalada Hobyo, dhankiisa Sacuudiga wuxuu aqoonsaday Baasaboorka Somaliland.
Soomaaliya waxey noqotay meel dowladaha Gacanka Carbeed ay ku loolamaan sida Iran, Qatar, Imaaradka Carabta iyo Sacuudiga oo dano kala duwan ka leh Soomaaliya, iyagoo isku dayaya iney saameyn weyn ku yeeshaan siyaasadda gudaha iyo tan dibadda ee dalka.
Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale xaalka uu ku xunyaya maxaa yeelay waxaa gacanteeda siyaasadeed ka maqan Somaliland, Puntland iyo Jubbaland, waxaana sidoo kale suuragal ah in Galmudug iyana ay baxsato.